Monday March 30, 2015 - 17:46:35 in Wararka by Super Admin
Taliyaha ciidamada gumeysiga itoobiya ee Soomaaliya ku sugan Jeneraal Gabre ayaa munaasabadda uga dhawaaqay in Itoobiya ay ciidankeedu ku guuleysteen qabsashada gobollada Bay iyo Bakool isagoona ammaan ujeediyay Shariif Xasan oo Itoobiya ugu magacaaban guddoomiyaha Koonfur galbeed Soomaaliya.
Arrinta layaabka leh ayaa aheyd markii Shariif Sakiin uu soo dhax istaagay ciidamada Xabashida Itoobiya kadibna qoorta loo geliyay maro calanka itoobiya lagu xardhahay oo saraakiisha xabashidu ku sheegeen billadda lagudoonsiiyo dabadhilifyada ka shaqeeya danaha Itoobiya.
intaasi kadib ayaa shariif Xasan loo dhiibay calanka Itoobiya isagoo kor ulalminayay islamarkaana muujinayay guul itoobiya usoo hoyatay.
Taliye ku xigeenka ciidanka shisheeyaha AMISOM ayaa isna saraakiisha Itoobiyaanka guddoonsiiyay bilad muujinaysa in Soomaaliya noqotay killi6 oo ay tahay qeyb kamid ah Itoobiya.
Shariif Sakiin oo taariikh madoow ku leh soomaaliya ayaa caddeystay dabadhilifnimadiisa "shariif Sakiin waxaa lagu guddoonsiiyay billada dabadhilifnimada runtii waa wax lala yaabo nin siyaasi soomaaliyeed sheeganaya oo inta calanka Itoobiya qoorta loo geliyay qoslaya kuna faraxsan”ayuu yiri Cabdi Cadde.
Shariif Sheekh iyo Xasan Garguurte oo Weerar Afka ah Ku qaaday Madaxada dowladda.